Fahasamihafana eo amin'ny New Zealand eTA, Visa ary eVisa - Torolàlana feno
«Fanontaniana napetraka matetika
Inona no maha samy hafa ny VISA, E-VISA, ary ny ETA?
Misy adihevitra be dia be eo amin'ireo olona fantatra fa manana visa, e-visa, ary ETA iray. Olona maro no misavoritaka momba ny e-visa ary mahatsapa fa tsy tena izy izy ireo na mety hanaiky ny sasany fa tsy mila manelingelina visa amin'ny fitsidihana firenena sasany ianao. Ny fangatahana visa fitsangatsanganana lavitra dia mety ho fahadisoana ho an'ny olona iray rehefa tsy fantany fa ny fankatoavana ny dia no mahasoa indrindra ho azy ireo.
Ho an'ny olona iray mangataka firenena toa an'i Canada, Australia, UK, Turkey na New Zealand dia azonao atao ny mangataka amin'ny alàlan'ny, e-visa, ETA na visa. Ireto ambany ireto dia manazava ny fahasamihafana misy amin'ireto karazana ireto sy ny fomba mety hampiharana azy ireo sy hampiasana azy ireo.
Inona no maha samy hafa ny Visa eTA sy ny E-VISA?
Andao aloha hahatakatra ny fanavahana ny ETA Visa sy ny e-Visa. Aoka hatao hoe mila miditra amin'ny firenentsika, Nouvelle-Zélande ianao dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny fampiasana ETA na e-Visa. Ny ETA dia tsy Visa fa fahefana amin'ny ankapobeny toy ny visa elektronika mpitsidika izay ahafahanao miditra amin'ny firenena ary afaka manararaotra ny fijanonanao any ianao mandritra ny 3 volana amin'ny fe-potoana.
Tsotra dia tsotra ny mangataka Visa ETA tokony handeha amin'ny tranokala takiana ianao ary afaka mangataka amin'ny Internet. Raha sendra mila mangataka any Nouvelle-Zélande ianao, amin'izay fotoana izay dia azonao atao ny manome ny visa ETA anao ao anatin'ny 72 ora ary koa tombony lehibe iray amin'ny fangatahana amin'ny alàlan'ny ETA dia azonao atao ny manova ny mailakao amin'ny Internet. alohan'ny handefasana. Azonao atao ny mangataka amin'ireo firenena amin'ny alàlan'ny famenoana ny taratasy fangatahana amin'ny Internet.
Toy izany koa ny toe-javatra amin'ny e-Visa izay fohy amin'ny visa elektronika. Mitovy amin'ny visa fa afaka mangataka izany amin'ny tranokalan'ny firenena takiana ianao. Izy ireo dia mitovy amin'ny ETA Visas ary koa misy teny sy fepetra mitovy amin'izany izay tokony harahinao rehefa mangataka ETA ianao na izany aza misy zavatra vitsivitsy izay miovaova roa. Ny e-Visa dia navoakan'ny Governemanta nasionaly ary mety mitaky famatsiam-bola kely ny famoahana azy ka mila miandry fotoana maharitra kokoa noho ny 72 ora ianao, tsy azonao atao koa ny manova ny subtleties amin'ny fotoana tsy ampoizinao. ny ho avy satria tsy azo ovaina raha vao natolotra.
Amin'ireto andalana ireto dia tokony hitadidy ianao rehefa mampihatra e-Visa izay tsy mandefa hadisoana. Misy fahasarotana bebe kokoa amin'ny eVisa ary fanovana bebe kokoa amin'ny eVisa.
Inona no mahasamihafa ny ETA sy ny VISA?
Rehefa nandinika ny visa e-Visa sy ny ETA isika dia andao jerena izay mahasamihafa ny ETA Visa sy ny Visa. Nodinihinay fa ny visa e-Visa sy ETA dia tsy misy manavaka izany fa tsy izany no toe-javatra manoloana ny ETA sy Visa.
ETA dia mora kokoa sy tsotra kokoa ny mangataka raha mifanohitra amin'ny Visa. Izy io dia visa elektronika izay midika fa tsy tokony ho eo ara-batana any amin'ny biraon'ny governemanta ianao ary hamita ny fomba rehetra. Rehefa voamarina ny visa ETA dia mifandraika amin'ny fampahafantarana anao izany ary mijanona ho manan-kery mandritra ny roa taona ary afaka mijanona any Nouvelle-Zélande mandritra ny 3 volana. Na izany aza, tsy izany no zava-misy amin'ny Visa. Ny visa dia rafitra fanamafisana ara-batana ary mitaky tombo-kase na fametaka apetaka ao amin'ny International ID / Travel Document anao amin'ny fangatahana hidiranao any amin'ny firenena ivelany. Zava-dehibe kokoa aminao koa ny mampiseho ara-batana ao amin'ny biraon'ny fitantananana ny rafitra iray manontolo.
Azonao atao koa ny mangataka visa mandeha haingana amin'ny tompon'andraikitra iraisam-pirenena na mahazo any amin'ny sisin-tany koa. Na izany aza, mitaky asa fitantanan-draharaha daholo izy ireo ary manatrika eo ara-batana ianao ary ilaina koa ny fankatoavana avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny hetsika.
Ny ETA dia mety manana fetra voafetra tsy mitovy amin'ny Visa. Ohatra, tsy azonao atao ny mangataka amin'ny New Zealand eTA (NZeTA) ho an'ny tanjona ara-pitsaboana.
«Miverina amin'ny FAQ